Blog चरणहरू तपाईको ब्ल्ग लाई ठूलो, फ्याट मुकदमाबाट जोगाउने | Martech Zone
Blog चरणहरू तपाईको ब्ल्ग लाई ठूलो, फ्याट मुद्दाबाट बचाउने
शनिबार, अगस्ट 16, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज BlogINDIANA को पहिलो दिन थियो र यो शानदार थियो। मैले धेरै गरे चहकिलो घटनाबाट, र केहि समयको लागि प्रत्यक्ष फिड पनि दियो।
मैले उपस्थित गरेको पहिलो सत्रले मलाई वास्तवमै उडायो, यो ब्लगिंगको कानुनी पक्षहरूमा थियो। सत्र एक वकील द्वारा नभई ब्ल्गर, एन्ड्र्यू पाराडीजद्वारा चलाइएको थियो, जसले वास्तवमै ब्लगिंगसँग सम्बन्धित कानुनीकरणका सबै जटिलताको नोट लिए। विषय यति आकर्षक थियो कि मैले तत्काल मेरो फुटर सम्पादन गरें र मेरो सेवा सर्त पृष्ठमा अस्वीकरण थप गर्‍यो।
१. फुटरमा लिंकको साथ तपाईंको ब्लगमा अस्वीकरण थप्नुहोस्
यस साइटमा प्रदान गरिएको सबै डाटा र जानकारी सूचनामूलक उद्देश्यहरूको लागि मात्र हो। Martech Zone यस साइटमा कुनै जानकारीको सटीकता, पूर्णता, वर्तमानता, उपयुक्तता, वा वैधता को रूपमा कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैन र कुनै पनि त्रुटि, चुकौती, वा यस जानकारीमा भएको ढिलाइ वा कुनै पनि घाटा, चोटहरू, वा यसको प्रदर्शनबाट उत्पन्न हुने क्षतिको लागि उत्तरदायी हुँदैन। प्रयोग गर्नुहोस्। सबै जानकारी एक को आधार मा प्रदान गरीन्छ।
अस्वीकरणले मानिसहरूलाई यो जान्न दिन्छ कि उनीहरूले यो ब्लगमा फेला पार्ने जानकारीलाई रायको रूपमा लिनु हो तथ्य होईन। यद्यपि त्यो सीमहरु धेरै स्पष्ट छ, कानूनी रुपमा होइन जब सम्म तपाईं यो राज्य! आज तपाईंको ब्लगमा एक अस्वीकरण राख्नुहोस्। अब यो गर्नुहोस्! प्रतीक्षा नगर्नुहोस्।
हुनु राम्रो हो त्याग भन्दा जोखिमa$ 20 लाख मुकदमा.
२. तपाईंको ब्लगको लागि सीमित देयता कर्पोरेशन सुरू गर्नुहोस्
थप रूपमा, म मेरो ब्लग पनि राख्छु अन्तर्गत मेरो सीमित देयता निगम (Llc)। मेरो Llc मुनि ब्लग राख्दै, DK New Media मेरो ब्ल्गलाई मेरो कम्पनीको छातामुनि राख्छ (जुन मैले एलएलसी सुरु गरेदेखि नै हो - तर मैले उपेक्षा गरेको थिएँ कि मेरो ब्लगको फुटरमा लेख्दा)।
तपाइँले टिप्पणीहरू जस्ता प्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्रीको बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन पहिलो संशोधन को धारा २230० अन्तर्गत सुरक्षित.
Support.इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेशन समर्थन गर्नुहोस्
म थप्दछु कि तेस्रो कुरा जुन तपाईंले अप्रत्यक्ष रूपमा आफैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ सदस्यता लिन वा दान गर्नु हो इलेक्ट्रोनिक फ्रंटियर फाउन्डेशन.
यो एकमात्र संगठन हो जुन बाहिर ब्लगर्सको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि खोजीरहेको छ।
चुप लाग्नुहोस् र महान पोष्टको खोजी गर्नुहोस् ?!
कम्पनीले कहिले सोशल मिडियामा गोता हाल्नु पर्छ?
अगस्ट 17, 2008 मा 9: 09 AM
यसले अन्ततः मलाई कम्तिमा पहिलो चरण गर्न विश्वास दिलायो।
तपाईको सेवा सर्तहरूमा दुई सानो हिज्जे गल्तीहरू छन्। तपाईले अरु दुई कुराहरु पनि सामिल गर्न सक्नुहुन्छ:
१) ट्रेडमार्कहरू उनीहरूका सम्बन्धित मालिकहरूका हुन्
२) तपाइँ लिंक गर्नुभएको सामग्रीमा तपाइँ जिम्मेवार हुनुहुन्न।
यो वास्तवमै सहयोगी छ। मसँग gs बर्षको ब्लगहरू छन् र म कहिले पनि अस्वीकरण वा केही चीज राख्दिन।
जुलाई,, २०१ at 24::2011। बिहान
धन्यवाद डग्लस, म यो तुरून्त गर्दछु, मार्टिनलाई पनि धन्यवाद, ट्रेडमार्क मुद्दा माथि ल्याउनका लागि।